२०७८ असोज १० आइतबार ०९:२९:००
स्क्रब टाइसफबाट संक्रमितलाई अत्यधिक ज्वरो आउने, सास फेर्न गाह्रो हुने, बेस्सरी टाउको दुख्ने, शरीरबाट पसिना आउने, शरीरका विभिन्न भागमा ससाना बिमिरा देखिने, हल्का आँखा रातो हुनेजस्ता लक्षण देखिन्छन्
यस वर्ष पूर्वी नेपालको सुनसरीबाट सुरु भएको डेंगु संक्रमण देशभर फैलिएर सरकारको काबुबाहिर गइरहँदा पश्चिम नेपालको पाल्पाबाट सुरु भएको स्क्रब टाइफस पनि उत्तिकै चुनौतीपूर्ण बनिरहेको छ । यद्यपि, डेंगु संक्रमणको भयावह अवस्थाका कारण स्क्रब टाइफसले अधिकांश जिल्लालाई आक्रान्त पारे पनि मिडिया र आममानिसको ध्यानमा आएको छैन ।
स्क्रब टाइफस एक प्रकारको जीवाणु ‘रिकेटसिया सुसुगामुसी’ले संक्रमित सूक्ष्म किरा ‘माइट’को टोकाइका कारण फैलिने रोग हो । यो किरा मुख्यतया खेत, झाडी, घाँस आदि भएको ठाउँमा बस्ने मुसा प्रजातिमा पाइन्छ । यो रोग उत्पन्न गर्ने ब्याक्टेरिया संक्रमित मुसाको पेटभित्रका प्वालमा बस्छ ।
नेपालमा भुइँचालो आएपछि बढी मात्रामा मुसा देखिन थालेको र त्यसको टोकाइका कारण मानिस संक्रमित बन्दै गइरहेको देखिन्छ । सुरुमै उपचार गरेको खण्डमा सामान्य एन्टिबायोटिकले ठीक हुने तर उपचारमा ढिलाइ भएको अवस्था जटिल बन्ने गर्छ । पछिल्ला वर्षमा यस रोगको संक्रमणबाट हुने मृत्युदर घटे पनि संक्रमित हुनेको संख्या भने बढ्दो क्रममा छ ।
बढीजसो समथर भूभाग र घरवरपर बस्ने मुसामा किर्ना हुन्छ । किर्नामा अन्डा, लार्भा, निर्खा, एडल आदि हुने गर्छन् । किर्नाको लार्भा ६ खुट्टे हुन्छन् । त्यसले मानिसलाई टोक्न पुग्यो भने मानिसमा ब्याक्टेरिया हालिदिन्छ, जसका कारण स्क्रब टाइफसको संक्रमण हुने गर्छ । अन्य कतिपय ब्याक्टेरिया कोषिकाभन्दा बाहिर पनि बाँच्न सक्ने भए पनि यो भने कोषिकामा मात्र बाँच्छ ।
गत वर्ष पनि स्क्रब टाइफस पाल्पाबाटै फैलिएको थियो । सन् २०१७ मा यस रोगबाट ६ सय ७० जना संक्रमित भएकोमा नौजनाको मृत्यु भएको थियो । त्यसैगरी, सन् २०१८ मा त्यो संख्या बढेर एक हजार ९८ मा संक्रमण भएको थियो भने चारजनाको ज्यान गएको थियो । सन् २०१९ को आठ महिना अवधिमा ५५५ जनामा यसको संक्रमण भइसकेको छ भने तीनजनाको मृत्यु भइसकेको तथ्यांक देखिन्छ । संक्रमितको संख्या अझै बढ्दै जाने विशेषज्ञहरूको भनाइ छ ।
पछिल्लो आठ महिनायताको तथ्यांकअनुसार स्क्रब टाइफसको सबैभन्दा बढी संक्रमण प्रदेश ५ मा २२४ जनामा देखिएको छ । त्यस्तै, सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा आठजनामा संक्रमण भएको पाइएको छ । त्यसैगरी, प्रदेश ३ मा १९१, सुदूरपश्चिममा ६१, गण्डकीमा ३९, प्रदेश २ मा २० र प्रदेश १ मा १२ जनामा संक्रमण देखिएको छ ।
प्रदेश १ का इलाम, झापा, मोरङ, सुनसरी, संखुवासभा, सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा, भोजपुर र धनकुटा नौ जिल्लामा यस रोगको प्रकोप देखिएको छ । त्यसैगरी प्रदेश २ का सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, बारा र पर्सा गरी सात जिल्ला बढी प्रभावित देखिन्छन् । त्यसैगरी प्रदेश ३ मा सिन्धुली, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलाञ्चोक, ललितपुर, भक्तपुर, काठमाडौं, नुवाकोट, धादिङ, मकवानपुर र चितवन गरी ११ जिल्लामा यसको प्रभाव बढी छ ।
यसैगरी गण्डकी प्रदेशका गोरखा, तनहुँ, लमजुङ, स्याङ्जा, कास्की, पर्वत, बाग्लुङ र नवलपरासीपूर्व गरी आठ जिल्ला यसको चपेटामा परेका छन् । उता लुम्बिनी प्रदेशमा चाहिँ गुल्मी, पाल्पा, नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलवस्तु, अर्घाखाँची, प्युठान, रोल्पा, रुकुमपूर्व, दाङ, बाँके, बर्दिया र नवलपुर गरी १३ जिल्लामा यसको प्रकोप फैलिएको देखिन्छ । कर्णाली प्रदेशमा भने यसको प्रभाव निकै कम देखिएको छ । यहाँका सल्यान, सुर्खेत, जाजरकोट, कालिकोट र रुकुम पश्चिममा यस रोगका संक्रमित भेटिएका छन् । उता सुदूरपश्चिम प्रदेशमा चाहिँ बाजुरा, बझाङ, डोटी, कैलाली, कञ्चनपुर, डडेलधुरा र बैतडी गरी सात जिल्लामा यसका संक्रमित भेटिएका छन् ।
लक्षण र जटिलता : स्क्रब टाइसफबाट संक्रमित व्यक्तिलाई अत्यधिक ज्वरो आउने, सास फेर्न गाह्रो हुने, बेस्सरी टाउको दुख्ने, शरीरबाट पसिना आउने, शरीरका विभिन्न भागमा ससाना बिमिरा देखिने, हल्का आँखा रातो हुने जस्ता लक्षण देखिन्छन् । सामान्यतया संक्रामक परजीवीले टोकेको पाँचदेखि १४ दिनको अवधिमा स्क्रब टाइफसको लक्षण देखिन थाल्छ । कसैकसैमा भने २० दिनपछि पनि लक्षण देखिन सक्ने चिकित्सकको भनाइ छ ।
स्क्रब टाइफसको समयमै निदान तथा उपचार नभएमा मल्टिपल अर्गान फेलियर (विभिन्न अंगले काम गर्न छोड्नु), निमोनियालगायत विभिन्न जटिलता उत्पन्न भई संक्रमितको मृत्यु हुन सक्छ ।
कसरी पत्ता लगाइन्छ ? : स्क्रब टाइफसको पहिचान बिरामीमा देखिएको लक्षण र सूक्ष्म किराले टोकेको चिनोबाट पनि गरिन्छ । यसमा रगत परीक्षणसमेत गरिन्छ । यसअन्तर्गत लिभर फंक्सन टेस्ट र सिबिसी काउन्ट गरिन्छ । स्क्रब टाइफसको एन्टिबडी पत्ता लगाउन एलाइजा टेस्ट र द्रुत परीक्षणसमेत गरिन्छ । हाल देशका अधिकांश प्रभावित जिल्लाका अस्पतालमा द्रुत परीक्षण कीटका माध्यमले रोग पत्ता लगाउने सेवा उपलब्ध छ ।
कसरी बच्ने ? : सामान्यता मानिसले आफ्नो घरवरपर मुसा आउन नदिने वातावरण तयार गर्नुपर्छ । खेतबारीमा काम गर्न जाँदा पूरा बाहुला भएको कपडा लगाउनुपर्छ । खुला चउरमा सुत्नु हुँदैन । संक्रमित मुसाले टोकेको खण्डमा लक्षण देखिनासाथ स्वास्थ्य संस्थामा गएर उपचार सुरु गरिहाल्नुपर्छ ।
(डा. कार्की सेवानिवृत्त वरिष्ठ पशु चिकित्सक हुन्)